Ngoko, ufuna ukuyi-spy. Indawo yokuqala abantu abaninzi abanethemba lokuhlawula umsebenzi we-spy bajonge i-Agency Central Intelligence Agency (CIA) yase-US. Nangona i-CIA ayinayo kwaye ayiyi kusebenzisa igama elithi "Spy," igosa liqesha abantu abambalwa abakhethiweyo umsebenzi wabo ukuqokelela ingqiqo yezobupolitika kunye nezopolitiko ezivela kwihlabathi-inene, iintlola.
Ubomi njenge-CIA Spy
Ngelixa i-CIA inikezela uluhlu olubanzi lweemisebenzi zamathuba angaphezulu, i-Directorate of Operations (DO), eyayibizwa ngokuba yiNational Clandestine Service (NCS), iqesha "abaPhicothi abaPhezulu" -ngayiphi indlela efunekayo-ukuqokelela ulwazi olufunekayo ukukhusela i-US umdla kumazwe angaphandle.
Le ngcaciso isetyenziselwa ukugcina uMongameli we-United States kunye neCongress bafundiswa ngongongobungqina bokhuselo, ubundlobongela bombutho, urhwaphilizo lukaRhulumente kunye nolunye ulwaphulo-mthetho.
Kwakhona, umsebenzi we-CIA wokuhlola awuyena wonke umntu. Ukujonga kuphela "umntu ongaqhelekanga ofuna izinto ezingaphezulu komsebenzi," iCandelo loMlawuli weeMisebenzi libiza u kucoca "indlela yokuphila eya kucelomngeni imithombo engqongqo yobulumko bakho, ukuzithemba kunye noxanduva lwakho," efuna "umoya onobuchule, ubuntu obunamandla, ubuchule obuphezulu bokuqonda, ubunzima bengqondo, kunye neyona nqanaba eliphezulu lokuthembeka. "
Yaye, ewe, umsebenzi we-spy ingaba yingozi, kuba, "Uya kufuneka ujongane neemeko ezihamba ngokukhawuleza, ezingenangqiqo kunye nezingabonakaliyo eziza kuvivinya ubuchule bakho," ngokutsho kweCIA.
Kubantu abazicingayo ngokwabo kwimingeni emininzi yokusebenza njengentlola, iCandelo loMlawuli weeMisebenzi okwangoku inezikhundla ezine zokungena kwiindawo ezifunyenweyo abafuna umsebenzi abagqibile iinkqubo zokuqeqeshwa kweejensi ezininzi.
Abaqokeleli abaziintloko kunye namaGosa oSebenzi bachithe ixesha labo elide lokuqashwa, ukuphatha kunye nokukhusela abantu ababonelela ngeengcali ze-HUMINT- zoluntu.
Abaqokeleli abaziintloko kunye namaGosa okuLawula iIqoqo baphatha umsebenzi weCore Collectors kunye neGosa loPhando, kwaye bavandlakanise kwaye basasaze i-HUMINT baqokelela kwimigaqo-nkqubo yaseMzantsi United yasekuhlaleni kunye nabahlalutyi bemimandla yolwazi.
Abasebenzi beeNkonzo zoLuntu basebenza njengeenxibelelaniso phakathi kwekomkhulu le-US ye-CIA kunye namagosa aseburhulumenteni kunye nabashenxisa ngaphandle. Bahamba ngokubanzi kwaye kufuneka babe yiingcali kwiindawo ezithile zehlabathi okanye izisongelo ezifana nobugandlo.
Amagosa eZakhono eziZodwa angasebenza naphina kusetyenziswa amava abo empi, okanye ezobuchwepheshe, ezobugcisa okanye izakhono zolwimi ukuqhuba okanye ukuxhasa yonke imisebenzi yeCIA.
Izikhundla zeJob kule mimandla ziquka iGosa lokuLawula uLwazi, iGosa leeLwimi, iGosa loPhando, iGosa loPhando oluPhezulu, iGosa loPhando loLuntu, kunye neGosa lokuHlola.
Ngokuxhomekeka kwimeko abaye bayifaka isicelo, abaviwa abaphumeleleyo bezithuba zokungena emsebenzini baya kuhamba ngeNkqubo yoQeqesho lwaBasebenzi beCIA, iNkqubo yoQeqesho lwaBasebenzi beClandestine, okanye iProgram yoQeqesho lwaBaseKhaya.
Emva kokugqiba ngempumelelo inkqubo yoqeqesho, abaqeshwa bezinga lokungena banikezelwa kwindlela yokusebenza ehambelana neenkcukacha zakhe, amandla kunye nezakhono kwiimfuno zangoku ze-arhente.
I-CIA Itshekishe iJobs Qualifications
Bonke abafaki-sicelo kuwo wonke umsebenzi we-CIA kufuneka bakwazi ukunikela ubungqina bokuba ngabemi be-US . Bonke abafake izicelo kumsebenzi kwiCandelo loPhuhliso kufuneka babe ne-degree ye-bachelor degree kunye ne-grade point ye-grade engama-3.0 kwaye banelungelo lokufumana imvume yokukhuseleka karhulumente.
Abafaki-sicelo bemisebenzi ebandakanya ulwazi lokuqokelela ulwazi loluntu kufuneka babe nolwazi ngolwimi lwangaphandle-ngakumbi ngakumbi. Ukhetho lokuqeshisa luvame ukunikezelwa kubafaki-zicelo abanamava abonakalisiweyo emkhosini, ubudlelwane bamazwe ngamazwe, ishishini, ezezimali, ezoqoqosho, isayensi yesayensi, okanye i-nyukliya, ubunjineli bendalo okanye yobunjineli.
Njengoko i-CIS ikhawuleza ukubonisa, ukuhlola kuyimisebenzi ebangelwa uxinzelelo. Abantu abangakwazi ukulawula uxinzelelo lwezakhono kufuneka bajonge kwenye indawo. Ezinye izakhono ezixhamlayo zibandakanya i-multitasking, ukulawula ixesha, ukuxazulula iingxaki, kunye nezakhono zokunxibelelana ezibhaliweyo nezibhaliweyo. Ekubeni igosa lolawulo lweengcali lidlalwa ngamaqela, ukukwazi ukusebenza kunye nokukhokela abanye kubalulekile.
Ukufaka izicelo kwiCIA
Ngokukodwa kwimisebenzi yokuhlola, i-CIA yesicelo kunye nenkqubo yokuvota ingazama nokuchitha ixesha.
Kunjenge-movie ethi "Iqela leMfazwe," ulawulo lwe-CIA wokuqala wokusebenzisa imisebenzi yokuhlola aluzange latsho nabani na ofaka isicelo somsebenzi wokuhlola. Nangona i-intanethi ye-intanethi ingalisebenzisi igama elithi "inhloli," i-CIA ixwayisa ngokucacileyo abafake izicelo ukuba bangabonakali ngenjongo yabo ukuba babe nye. Ukuba akukho nanye into, oku kubonisa ukuba i-spy iyimfuneko yokufuna ukufihla ubungqina bakhe bokwenene kunye neenjongo zabanye.
Imisebenzi kwiCandelo loPhando lingasetyenziswa kwi-intanethi kwiwebhusayithi yeCIA. Nangona kunjalo, bonke abafake izicelo kufuneka bafunde ngokucophelela malunga nenkqubo yesicelo ngaphambi kokuba benze njalo.
Njengenqanaba elongezelelweyo lonqabiseko, abafake izicelo bafuneka ukuba benze i-akhawunti ekhuselweyo ye-akhawunti ngaphambi kokuqhubeka nesicelo. Ukuba inkqubo yesicelo ayigqityiwe kwiintsuku ezintathu, i-akhawunti kunye nayo yonke ingeniso efakweyo iya kususwa. Ngenxa yoko, abafaki-sicelo kufuneka baqinisekise ukuba banakho ulwazi olufunekayo ukugqiba isicelo kunye nexesha elininzi lokwenza njalo. Ukongeza, i-akhawunti iya kukhubazeka ngokukhawuleza xa inkqubo yokufaka isicelo igqityiwe.
Emva kokuba isicelo sigqityiwe, abafaki zicelo bafumana ukuqinisekiswa kwi-screen. Akukho imeyili okanye ukuqinisekiswa kwe-imeyile kuya kuthunyelwa. Ukufikelela kwizikhundla ezine ezahlukileyo zingafakwa kwisicelo esifanayo, kodwa abafaki zicelo bacelwa ukuba bangenise izicelo ezininzi.
Nangemva kokuba i-CIA yamkela isicelo, ukuhlolwa kwangaphambili komsebenzi kunye nokuhlolwa kwezinto kungathatha ixesha elide nje ngonyaka. Abafakizicelo abenza isinqununu sokuqala baya kufuneka ukuba bavavanywe ngonyango nangokwengqondo, ukuvavanya iziyobisi, ukuvavanywa kwamatyala, kunye nokuhlola kwendawo yangasese.
Ingqikisho yokutshekisha iya kulungiswa ukuqinisekisa ukuba umenzi-sicelo unokuthenjwa, akakwazi ukutyhulwa okanye ukunyanzeliswa, uzimisele kwaye unakho ukukhusela ulwazi olubucayi, kwaye akazange athembele nakwamanye amazwe.
Ngenxa yokuba umsebenzi omningi we-CIA uhlolwe ngokufihlakeleyo, nokuba umsebenzi obuqili awunakuthola ukubonakala komntu. Nangona kunjalo, i-arhente ikhawuleza ukuqonda kunye nokuvuza abasebenzi abavelele ngaphakathi.
Ulawulo lwabasebenzi abasebenza kwamanye amazwe bafumana ukuhlawula ngokukhuphisana kunye neenzuzo kubandakanywa nokunakekelwa kwezempilo, ukuhamba ngamazwe ngamahhala, izindlu zabo kunye neentsapho zabo, kunye neenzuzo zemfundo kwintsapho yabo.
Yintoni egcina i-Chayil?
Ikhalenda likaAztec Ilitye: Kunikezelwa kwi-Sunt Az Sun
Eastern Redcedar, Umthi oqhelekileyo eNyakatho Melika
Ingqwalasela ye-'Deck Doctrine 'kunye' Yima imiyalelo yakho '
I-Whistle nguBenjamin Franklin
Yintoni i-Overregularization ngegrama?
Ukuqonda iNkcubeko yoMzantsi Afrika yoBandlululo